08/07/2011 : Mampigadra miaramila ny miaro Lapam-panjakana (+vidéo Interview Me. Hanitra Razafimanantsoa)
Ny Fitsarana mitanila nitondrana ny Jly Raoelina sy ny Kol. Djadifar ary n y kol. Andriamihoatra omaly dia manaporofo fa mamporisika ny olona hanani-dapa ny FATE. Rehefa nentin’izy ireo hanao izany manko ny mpiray tanindrazana sasany tamin’ny 07 Febroary 2009 dia ireo niaro ny lapa indray no aiditra am-ponja aty aoriana na dia asany aza izany ary ny lalàna no mibaiko azy hanao izany. Anjaran’ireo rehetra tena mbola « tandroka aron’ny vozona » no mandinin-tena satria fanitsahana ny hasin’ny asan’izy ireo no azo andikana ny didim-pitsarana nivoaka omaly na dia tsy isan’ireo nandray anjara tamin’ny fiarovana ny Lapa aza ireto voapanga ireto.
Isan’ny fandikana fototra ny paipaika amin’ny raharaham-pitsarana ny tsy fisian’ny porofo amin’ny fiampangana azy telo mirahalahy manamboninahitra ambony. Na dia efa nitondra ny antotan-taratasy rehetra manadio azy telo mirahalahy aza ireo mpiaro dia nolavin’ny mpitsara avokoa izany. Eny na dia ny fampahatsiahivana ny lalana tokony harahin’ny antotan-taratasin’ady mikasika ity raharaha 07 Febroary ity aza dia notsipahin’ny Fitsarana FATE avokoa. Tsy mbola kivy anefa ireto manamboninahitra ireto sy ireo mpiaro azy fa hampiakatra ny raharaha ambonimbony kokoa indray mandra-pivoakan’ny fahamarinana. Izany indrindra no antony mbola itakian’izy ireo ny hihainoana ny Lt-Kol. Charles Andrianasoavina izay niaina ny fanomanana ity Sabotsy mena ity.
21/06/2011 : Efa in’enina nitsivalana ny FATE (+vidéos)
Betsaka ny lalana efa nodiavina nikatsahana izay hamahana ny olana eto Madagasikara. Natomboka teto Madagasikara ka hatrany ivelany. Raha ny hita maso aloha dia ny FATE hatrany no miteraka sakana amin’ny fivahan’ny krizy eto an-tanindrazana. Metimety amin’izy ireo hatrany ny fazahoana fotoana fanampiny ipetrahana eo amin’ny fitondrana satria mampitombo ny harena ananany. Vokany dia ataon’I TGV sy ny forongony izay hampitarazoka ny fitadiavam-bahaolana. Izy rahateo tsy miaina ny fahorian’ny vahoaka tsy mandady harona ka tsy dia mampaninona azy na dia tsy mahazo fankatoavana aza ny fitondrany. Ireo “mpiara-misôsy” manko afaka mivelona amin’ny vola maloto sy ny varo-maizina atao amin’ny harem-pirenena Malagasy.
Ny fahitan'ny Pr. Zafy ny toe-draharaha ankehitriny :
Ny fiverenn'ny Filoha RAVALOMANANA sy ny fankatoavana iraisam-pirenena :
Ny fanintsiana mety hatao amin'ny sori-dalana :
Ny dinika farany tokony hatao eto Madagasikara :
16/06/2011 : 21 miliara Euro : voadingana i Madagasikara
Fampelabelarana maharitra 30 minitra no hiparitaka eraky ny hainoamanjery eto Madagasikara manomboka androany. Ny Filoham-pirenena no mitondra ny fahitany ny toe-draharaha eto amintsika sy ny ho toeran’I Madagasikara eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Nifampizarana teo amin’ny Kianjan’ny Finoana Magro Behoririka izany androany ary liana tanteraka ny mpitolona rehetra nihaino ny fanazavan’ny Filoham-pirenena.
Isan’ny hevi-dehibe nitondrany fanazavana ny tokony hampitsaharana ny fitiavan-tenan’ny mpanao politika mba ahafahan’I Madagasikara mivoaka amin‘ny krizy. Mitohy hatrany ny fizakan’ny vahoaka Malagasy ny vokatr’izao krizy izao. Fanampiana mitentina 21 miliara Euro no voarain’ny vondrona misy antsika ao amin’ny SADC saingy tsy hahazo anjara amin’izany isika noho ny tsy fisian’ny fitondrana marim-pototra eto Madagasikara. Firenena telo hafa no hifampizara izany fanampiana goavana izany raha toa ka afaka nitondra amin’ny fampandrosoana izany raha nivaha ny olana.
“Aoka ny lasa homba ny lasa …”
Nanamafy ny Filoha RAVALOMANANA Marc fa tsy tokony hifampitana alahelo ny samy Malagasy. “Efa santatry ny fifampihavanana ny firaisana latabatra teo amiko sy Monja Roindefo ary Pierrot Rajaonarivelo tany Gaborone” hoy izy “ary afaka niresaka tsara izahay sady nanaiky fa ny ho avy no tokony ho banjinina”. Raha toa ka afaka mampangina ny hambom-pony ny tsirairay dia tsy ho ela dia tafaverina amin’ny laoniny ny fiainan’ny Malagasy rehetra.
15/06/2011 : Tsy itoeran’ny fahendrena ny FATE (+vidéo)
Tsy mendrika olom-pirenena vanona ny fanambarana izay nataon’ny FATE sy ny be botiny omaly. Ireo vahaolana rehetra amin’ny fivoahana amin’ny krizy mihitsy no notsipahiny. Izany hoe tsy ny tombontsoan’ny Firenena no banjinin’izy ireo fa ny hamenoany ny paosiny hatrany. Roa taona mahery izao tsy mbola nisy vahaolana natolotr’izao tontolo izao ka nankatoavin’ny FATE ary notanterahiny. Ny mety aminy dia ny mijanona maharitra indrindra eo amin’ny fitondrana hany ka ny hamoritra ny vahoaka Malagasy hatrany no ataony fitaovana mba hahatongavany amin’ny tanjona iriny.
Efa natao avokoa ny fanangonana ny hevitry ny mpanao politika rehetra vao namoaka ny fehi-keviny tany Sandton ny SADC. Efa teo am-pelatanan’ny mpanelanelana ny soso-kevitra afaka hanintsiana ny sori-dalana saingy toa ny tompony indray izao no malailay fonosana. Raha niezaka nametraka lahanteny miantso fitoniana ny filohan’ny FATE dia azo antoka fa tafavoaka am-boninahitra amin’izao fanonganam-panjakana mbola tohizany izao. Saingy ankehitriny kosa rehefa nitsipaka ny fanapahan-kevitra politika iray noraisin’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izy ireo dia mazava hoazy tsy ho ela ny fepetra ho raisin’izao tontolo izao momba azy ireo.
26/05/2011 : Zafilahy Stanislas : « mitaky ny fialan-dRajoelina ny vahoaka Malagasy » (+vidéo)
« Olona tsy miandany no tokony hitondra ny tetezamita » hoy ny Depiote Zafilahy Stanislas. Ilaina izany ahafahana miroso amin’ny fifidinana tena mahitsy sy mba ahafahan’ny rehetra milatsaka hofidiana mba hotsarain’ny vahoaka. « Na mankany Gaborone na tsia i TGV dia tsy dia hampiova zavatra izany » hoy ihany i Zafilahy. Raha ny fanazavan’ity olom-boafidy ity manko dia tsy maintsy handray andraikitra hentitra ny SADC amin’io fotoana io ka asakasak’izay tsy vonona hiaro ny heviny any an-toerana.
Fafilainga fotsiny manko ny filazana fa sonia sisa no hatao any Botsoana satria tsy mbola nisy fankatoavana velively tao anatin’ny fehi-kevitra nivoaka tamin’ny 20 May lasa teo. « Tsy misy azo ahilika amin’io fihaonana io ny ankolafy politika efatra tany Maputo » hoy ny solombavam-bahoakan’i Vavatenina « tokony jerena kosa ireo hery politika hafa matanjaka tokony handray anjara amin’izany dinika izany ». Araky ny fanazavana nentin’ity Filohan’ny vondrona parlemantera TIM ity dia tsy mety amin’ny vahoaka intsony ny hitondran’i TGV ny tetezamita ary « na izy tenany aza efa nanala tena rehefa nanafoana ny fifanarahana vita sonia tany Maputo sy Addis-Abeba ».
19/04/2011 : "Pas d’abus ni de censure à Madagascar". Des allégations mensongères. selon le Président Ravalomanana
Le Président Ravalomanana met les médias malgaches au défi de publier son interview. Les affirmations selon lesquelles il n'y a pas de violations des droits de l'homme ni de censure à Madagascar sont un mensonge, et une insulte à tous ceux qui sont emprisonnés, sans procès, torturés, exilés, dit le président Marc Ravalomanana. Il a répondu aux allégations formulées à Madagascar par le meneur du coup d'État de 2009, Andry Rajoelina.
ITW_President_RAVALOMANANA.pdf 369.71 Ko
04/04/2011 : Guy Rivo Andrianarisoa-Feuille de route paraphée, sans valeur légale (Recueillis sur The Times of Madagascar)
La décision finale de la Troïka fait actuellement l’objet de diverses interprétations mais aussi de spéculations. Comme le cas de la mouvance Ravalomanana qui a sa propre version quant à cette ultime décision. Force est de constater que chaque camp prend ce qui lui intéresse et l’interprète à sa façon, à son bénéfice. Le porte-parole de la mouvance Ravalomanana, Guy Rivoniaina Andrianarisoa a bien voulu apporter des explications sur cette décision de la Troïka.
Source: The Times Of Madagascar
Guy_Rivo_Andrianarisoa_sur_The_times_of_Madagascar.pdf 456.26 Ko
28/02/2011 : Nidona amin’ny rindrina I Simao (+vidéo)
Na dia eo aza ny fanambarana etsy sy eroa ataon’ny Dr. Simao dia mazava ny fanambarana iombonana navoakan’ny Filoha RAVALOMANANA Marc sy Atoa Joachym Chissano. Manamafy izy roalahy ireto fa tsy mbola midika fankatoavana ny volavolan-tsoridalana akory ny fanaovana sonia ny fanekena hanohy ny dinika. Io mantsy no nohirahirain’ny FATE sy ny iraka nalefan’ny SADC tarihin’I Simao. Hanova zavatra maro eo amin’ny fizotry ny fifampidinihana ireny fanambarana nivoka taorian’ny fihaonana tao Sandton Afrika Atsimo iny satria mandiso ireo kajy politika izay namoronana ireo antoko kely etsy sy eroa mba ahafahana miroso amin’ny fizarana seza.
Ny vahoaka no tompon’ny teny farany
Ireo antoko politika maro noforonina hanenjehana ny sonia dia tsy hahasolo-tena velively ny vahoaka Malagasy maro an’isa. Maro amin’izy ireo mantsy no tsy manana olona any amin’ny fototra akory fa dia manenjika “récépissé” fotsiny azahoany mametraka ny rango-pohiny eo amin’ilay vakiraokan-tsoridalana. Na dia efa ny tompony mihitsy aza mantsy no manambara fa tsy mbola io no tena izy dia mbola misisika ihany ny marivo salosana sasany. Ireo Filoham-pirenena lanim-bahoaka anefa dia,farafahakeliny, nahazo ny antsasamanilan’ny isan’ny mpifidy tamin’ny fotoana nahalany azy. Noho izany izy ireo no tena afaka misolovava ny vahoaka sy mahalala ny fahorian’ny valala tsy mandady harona.
21/02/2011 : Raveloson Constant : “mbola afaka miverina amin’ny heviny Rajoelina” (+vidéo)
Araky ny fahitan-dRaveloson Constant dia “porofo lehibe mitohoka amin’ny tendan’ny HAT ny tamin’ny sabotsy.Porofo fa any amin’ny Filoha RAVALOMANANA sy ny ankolafy telo ny vahoaka”. “Mbola afaka miverina amin’ny teniny I TGV” hoy I Constant “ka miala amin’ny fiziriziriana hitondra ny firenena hanamasina ny mpanongam-panjakana”. Manaporofo ny fahendren’ny mpandala ny ara-dalana ny toy ireny satria tsy nisy fandrobana na fandorana velively teny Ivato na dia efa manodidina ny telo hetsy mahery aza ireo olona nivonona hitsena ny Filoha RAVALOMANANA Marc ary manomboka maraina ka mandrakalina mihitsy. “Anjarantsika amin’izay ny manery an’ireo mpanongam-panajakana hikisaka moramora mba tsy h ny vahoaka no hanilika azy” hoy ihany Raveloson Constant. Miantso an-dRajoelina hanaiky fifampiresahana I Constant ary hanafoana ny fanakanana ny Filoham-pirenena hiverina an-tanindrazana.
18/02/2011 : Rev Satrobory : “tokony samborina i Alain Ramaroson…” (+vidéo)
Manoloana ny fampihorohoroana ataon’i Alain Ramaroson, mpitarika ao anivon’ny HAT, dia mandray ny andraikiny ny Rev Satrobory. Aminy dia izay olona miezaka manangona zatovo bokonozatra ka manam-pikasana hanakorontana amin’ny Sabotsy ho avy izao no tokony haiditra am-ponja avy hatrany. Ny endrika fampitahorana dia midika fahatahorana ny Filoha RAVALOMANANA araky ny voalazan’ity filoha nasionalin’ny AMF-3FM ity. “Tsy hampihemotra ny vahoaka izany” hoy izy “ary mamporisika ny mpitandro filaminana izahay handray ny andraikiny raha vao misy mitady hanakorontana”. Amin’izao fotoana izao dia misy soratsoratra maro manerana ny renivohitra mampitovy ny Filoha RAVALOMANANA amin’ireo mpanao didy jadona nesorin’ny vahoaka tamin’ny toerany tato ho ato toy ny tany Egipta sy tany Tonizia. “Ireny olona ireny sy ny mpanakarama azy no tokony hogadraiana haingana” araky ny filazan’I Satrobory.